Obama iyo Erdogan oo ka Wadahadlaya Syria
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta oo Khamiis ah Aqalka Cad ku soo dhaweynayaa ra’iisul-wasaaraha wadanka Turkey Recep Tayyip Erdogan, si ay uga wadaxaajoodaan xaaladda Syria iyo ammaanka gobalka.
Xiriirka Obama kala dhaxeeya Ra’iisul-wasaare Erdogan, ayaa ah mid ka mid ah xiirarada ugu wanaagsan ee uu la leeyahay madaxda caalamka
Obama iyo Erdogan ayaa mowduuca ugu wayn ee ay ka wadahadlayaan waxa uu yahay sidii xal loogu heli lahaa qalalaasaha siyaasadeed ee Syria, iyadoo tirada dhimashaduna ay sii kordheyso.
Wadanka Turkey ayaa kaalin muhiim ka qaatay taakuleynta aan hubka aheyn iyo taageerada siyaasadeed ee la siiyo falaagada Syria.
Wareysi uu Erdogan dhawaan siiyey Telefishinka NBC News, ayuu ugu baaqay Mareykanka inay qaataan mas’uuliyad dheeri ah si loo soo afjaro colaadda Syria. Sidoo kale waxa uu ka hadlay caddeymaha ah in la adeegsaday hubka kiimikada ah, waxa uuna sheegay in arrimihii dhinaca Obama lagama taabtaanka ka ahaa waa hore laga gudbay.
Soner Cagaptay oo ka tirsan machadka Washington Institute for Near East Policy, ayaa sheegay in Ankara ay aad uga walaacsantahay in la arko Syria kala qeybsan oo aan awood laheyn, iyagoo ka baqaya inay noqoto Soomaaliya oo kale.
Maalin ka hor wadaxaajoodka labada mas’uul, ayaa afhayeenka Aqalka Cad Jay Carney oo la hadlayey warbaahinta waxa uu sheegay in Mareykanku ay wadanka Turkey iyo saaxiibada kale kala shaqeyn doonaan sidii kala guur siyaasadeed uga dhici lahaa wadanka Syria.
Ra’iisul-wasare Erdogan iyo Madaxweyne Obama, ayaa si wada jir ah u qaban doona shir jaraa’id ka dib kulanka ay maanta Aqalka Cad ku yeelanayaan.